China Ginger Powder rụpụta na ụlọ ọrụ | Nongchuanggang
A na-eji ntụ ọka ginger na-eme ntụpọ ọka. Ebe ọ bụ na flakes emeela ka ọ nwee nnukwu uru maka ahụike na ahụike nke ahụ, yabụ ị drinkingụ ntụ ntụ ginger nwekwara ike inye aka na ahụike. Yabụ, ginger ntụ ntụ na-eteta ụra, na-akwalite agụụ, nguzogide oxidation, igbochi akpụ, mgbochi ịka nká, oyi, gbochie ọrịa ngagharị, melite ogo ụra na akụkụ dị iche iche nke ọrụ na nsonaazụ. Ya mere maka ọrụ eriri afọ adịghị mma, agụụ na-adịghị mma, mgbaàmà siri ike, ụra na-ehi ụra, ntụ ntụ ginger bụ ụdị ezigbo nri & ọgwụ.
Nkọwa ngwaahịa ginger: A na-eji ntụ ọka ginger na-eme ntụ ntụ. Ebe ọ bụ na flakes emeela ka ọ nwee nnukwu uru maka ahụike na ahụike nke ahụ, yabụ ị drinkingụ ntụ ntụ ginger nwekwara ike inye aka na ahụike. Yabụ, ginger ntụ ntụ na-eteta ụra, na-akwalite agụụ, nguzogide oxidation, igbochi akpụ, mgbochi ịka nká, oyi, gbochie ọrịa ngagharị, melite ogo ụra na akụkụ dị iche iche nke ọrụ na nsonaazụ. Ya mere maka ọrụ eriri afọ adịghị mma, agụụ na-adịghị mma, mgbaàmà siri ike, ụra na-ehi ụra, ntụ ntụ ginger bụ ụdị ezigbo nri & ọgwụ.
Jinja ntụ ntụ na oge na-ekpo ọkụ nwere mmetụta nke mkpali, ọtụtụ ịbelata okpomọkụ na-agba ume, mkpali ahụ; Ngwunye ginger nwere ike iwepụ ike ọgwụgwụ, ụra, ụra, ehighị ụra nke ọma, mgbatị afọ, afọ mgbu na mgbaàmà ndị ọzọ.
Gingerol na diphenylheptane ogige ndị dị na ginger ntụ ntụ na-enwe mgbochi mgbochi oxidation na mmetụta mbelata nke cholesterol. Mmetụta mgbochi tumo; Rie ginger powder nwere ike gbuo oge ịka nká, ndị agadi na-erikarị ginger ntụ nwere ike wepu "ntụpọ senile".
Ginger ntụ ntụ nwere onyinye yiri sodium salicylate, nke ya na agba pechaa na anticoagulant nke ọbara. Ginger ntụ nwere mmetụta pụrụ iche na mbenata lipids ọbara, belata ọbara mgbali, igbochi infarction myocardial na igbu oge ịka nká.
Tinye tii-ngaji nke ginger ntụ n’ime mmiri ọkụ (ihe dị ka ogo 40) ma tinye ya na mmiri ọkụ ka ị banye n'ụkwụ ndị ọrịa nwere ahụ ọkụ na oyi. Ngwunye ginger nwere ike izere usoro mmepe nke ọrịa ahụ ma gbochie ahụ ọkụ na oyi. Ọbụna ma ọ bụrụ na ịnweghị ahụ ọkụ ma ọ bụ oyi, ntụ ntụ ginger nwekwara ike belata oyi site na ịmị ụkwụ gị na mmiri ọkụ. Ginger ntụ nwere ike inye aka gbochie flu.
Dị iche iche Guputa wepụ
Nkwakọ ngwaahịa DRUM
Ọkwa Pharma ọkwa
Aha ngwaahịa Ginger Root wepụ
Ọdịdị Ìhè Yellow Powder
Nkọwapụta 5% 10% Site na HPLC
Adị ndụ afọ 2
Usoro Ule HPLC UV
Ihe nlele Dịnụ
Akụkụ ejiri Mgbọrọgwụ
MOQ 1 N'arọ
Ngwugwu 25kg / igba
Urughuru Size 100% Gaa 80 ntupu
Nke gara aga: Oyi kpọnwụrụ akpọnwụ ginger
Osote: Organic Ginger